Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်)
Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Tadalafil ကို ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါများတွင် အသုံးပြုသည်။ လိင်စိတ်ကြွချိန်တွင် tadalafil သည် လိင်တံသို့ သွေးများပိုမိုရောက်ရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် လိင်တံကို ထောင်မတ်စေပြီး ထိုအနေအထားကိုလည်း ကြာရှည်ထိန်းထားစေနိုင်သည်။tadalafil ကို ဆီးကျိတ်ရောင် ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာစေရန်လည်း အသုံးပြုသည်။၎င်းသည် ဆီးကျိတ်နှင့်ဆီးအိမ်ရှိ ကြွက်သားများကို ပြေလျော့စေခြင်းဖြင့် ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း၏ လက္ခဏာများဖြစ်ကြသော ဆီးသွားရာတွင် အစခက်ခြင်း၊ ဆီးသွားရ အားမရခြင်း၊ဆီးခဏခဏသွားခြင်း(ညအိပ်နေရင်း ဆီးထသွားရခြင်း) စသည်တို့ကို သက်သာစေသည်။ဤဆေးသည် (HIV၊အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ဆီးပူညောင်းကျ၊ ဆစ်ဖလစ် အစရှိသော) လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများကိုမူ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချရသော လိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်စေရန် ကွန်ဒုံးကို အသုံးပြုပါ။ အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုလျှင် သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကို မေးမြန်းပါ။
အခြားအသုံးပြုမှုများ။ ။ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် အသုံးပြုပုံများသည် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော ဆေးအညွှန်းတွင်မပါဝင်သော်လည်း သင့်ဆရာဝန်က ညွန်းဆိုနိင်သာ အသုံးပြုမှု အခြေအနေများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် ရောဂါအနေအထား အတွက် tadalafil ကို အသုံးပြုမည်ဆိုလျင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် ရှိမှသာ အသုံးပြုသင့်သည်။
tadalafil ကို pulmonary hypertension ဟုခေါ်သော အဆုတ်တွင်း သွေးဖိအားများခြင်းကို ကုသရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
tadalafil ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း (အများဆုံး တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်) အစာရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ သောက်နိုင်သည်။ ဆေးပမာဏ အနည်အများသည် သင်၏ ရောဂါအခြေအနေ နှင့် ဆေးကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်း လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါသည်) ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။
ဆီးကျိတ်ရောဂါအတွက် tadalafil ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း (အများအားဖြင့် တနေ့လျှင် တကြိမ်) သောက်နိုင်သည်။ အကယ်၍သင်သည် ဆီးကျိတ်ရောင်ရောဂါ၏ လက္ခဏာများကို သက်သာစေရန် finasteride ကို ပါတွဲဖက် သောက်သုံးနေရပါက ဤဆေးကိုမည်သည့်အချိန်ထိ ဆက်လက်သောက်သုံးရမည်ကို သင့်ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်းအတွက် tadalafil ကို ဆေးညွှန်းပုံစံ ၂မျိုးဖြင့် သောက်သုံးနိုင်ပြီး သင့်အတွက် မည်သည့်ပုံစံက အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကို ဆရာဝန်က ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဆေးအချိုးအစားပမာဏသည် သင်ရွေးချယ်လိုက်သည့် သောက်သုံးမှုပုံစံပေါ် မူတည်နေခြင်းကြောင့် ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်ကို အတိအကျလိုက်နာပါ။ ပထမနည်းလမ်းသည် လိုအပ်မှ tadalafil ကို သောက်သည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောက်ရာတွင် လိင်မဆက်ဆံမီ အနည်းဆုံးမိနစ်၃၀ခန့် ကြိုတင်သောက်သုံးရမည်ဖြစ်ပြီး ဆေး၏အာနိသင်သည် ၃၆နာရီခန့်အထိ သက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယနည်းလမ်းမှာ tadalafil ကို တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်ပုံမှန်သောက်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ သောက်ပါက ဆေးတစ်လုံးနှင့် တစ်လုံးအကြား မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို လိင်ဆက်ဆံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍သင်သည် ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါအတွက်သာမက ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်းအတွက်ပါ tadalafil ကို သုံးစွဲမည်ဆိုလျင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သုံးစွဲပါ(အများအားဖြင့် တနေ့လျှင် တကြိမ်)။ ဆေးတစ်လုံးနှင့် တစ်လုံးအကြား မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို လိင်ဆက်ဆံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်သည် tadalafil ကို ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါအတွက်ဖြစ်စေ၊ ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ ၂ခုလုံးအတွက်ဖြစ်စေ နေ့စဉ်သောက်သုံးရပါက ဆေးအာနိသင် အများဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ရစေရန် ဆေးကို အချိန်မှန်မှန် သောက်သုံးပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တူညီသော အချိန်တခုတည်းတွင် သောက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင့်ရောဂါ အခြေအနေ မသက်သာလျှင်ဖြစ်စေ၊ ပိုဆိုးလာလျှင်ဖြစ်စေ
Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Tadalafil ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Tadalafil ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Tadalafil ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Tadalafil ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Tadalafil ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။tadalafil ဆေးသောက်သုံးမည်ဆိုလျင် အောက်ပါအခြေအနေများကို သတိထားသင့်သည်။
tadalafil ဆေးနှင့် သို့မဟုတ် အခြားသောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန်ကို သေချာစွာအသိပေးပါ(ဆေးသာမက အစားအသောက်၊ဆိုးဆေး၊အစားအစာများကို တာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများပါ အကျုံးဝင်သည်)။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်ဆေးမဟုတ်ပါက ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
Cialis ဆေးကို ကလေးများတွင် အသုံးမပြုရပါ။ ဆေး၏ အကျိုးအာနိသင်ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို မသိရှိနိုင်ပါ။ Adcirca ဆေးအာနိသင်နဲ့အသက်အရွယ်ကြားဆက်နွယ်မှု ရှိမရှိလုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိပါ။
ကလေးများတွင် ဆေး၏ အကျိုးအာနိသင်ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိမရှိကို မသိရှိနိုင်ပါ။
လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များအရ သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် tadalafil ၏ အသုံးဝင်မှု ဆေးစွမ်းကို ကန့်သတ်စေမည့် ပြဿနာမရှိသေးပါ။ သို့သော် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့် နှလုံးရောဂါများ၊ အသည်းရောဂါ၊ကျောက်ကပ်ပြဿနာ စသည်တို့ရှိနေနိုင်သဖြင့် tadalafil ဆေး၏ ဆေးပမာဏကို ဂရုတစိုက်ချိန်ဆရန် လိုအပ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက tadalafil သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
• အမြင်အာရုံထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် မျက်စိမမြင်ရတော့ခြင်း။
• နားထဲတွင် ဆူညံသံများ ကြားနေရခြင်း သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် နားမကြားရတော့ခြင်း။
• ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊တခုခုဆွဲထားသကဲ့သို့ ရင်ဘတ်ထဲတွင် လေးလံနေခြင်း၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းသည် လက်မောင်းသို့မဟုတ် ပုခုံးထိပ်သို့ ပျံ့သွားခြင်း၊ပျို့ခြင်း၊ချွေးစေးများပျံခြင်း၊နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခြင်း။
• အသက်ရှုမဝခြင်း၊မောခြင်း၊ခြေလက်များ ဖောရောင်ခြင်း။
• ၄နာရီ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ကြာကြာ လိင်တံထောင်မတ်ပြီး နာကျင်နေခြင်း။
• မျက်နှာ၊လည်ပင်း၊ရင်ဘတ်တို့တွင် နီရဲပူနွေးခြင်း။
• အအေးမိခြင်းလက္ခဏာများဖြစ်သော နှာစေးခြင်း၊နှာချေခြင်း၊လည်ချောင်းနာခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေကိုသုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင် tadalafil ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ သင့်ဆရာဝန် အနေနဲ့ tadalafil ကို အသုံးမပြုတော့တာဘဲဖြစ်ဖြစ် သင်သုံးစွဲနေတဲ့ အခြားဆေးတွေကို ပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများကို ယေဘုယျအားဖြင့် tadalafil နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။ သို့သော် အချို့သော အခြေအနေများတွင်မူ သုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးများသည် tadalafil ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပို၍ဆိုးကောင်းဆိုးစေနိုင်သည်။ သို့သော် အတူတကွ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ကုသမှုရလာဒ်ကိုလည်း ရစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Tadalafil ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Tadalafil က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Tadalafil ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• လိင်တံပုံစံမမှန်ခြင်း(လိင်တံကောက်ခြင်း၊မွေးရာပါ လိင်တံပြဿနာများရှိခြင်း အပါအဝင်) —-
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေရန် အခွင့်အလမ်းများသဖြင့် ဆေးကို သတိနှင့်သုံးစွဲရမည်။
• အသက် ၅၀နှစ် အထက်ဖြစ်ခြင်း။
• သွေးတွင်း အဆီဓါတ်များခြင်း။
• crowded disc ဟုခေါ်သော မျက်စိရောဂါတစ်မျိုးရှိခြင်း။
• ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူဖြစ်ခြင်း —–> non-arteritic ischaemic optic neuropathy ဟုခေါ်သော မျက်စိရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို ပိုမိုများစေသည်။
• ရင်ဘတ်ခဏခဏ အောင့်တတ်ခြင်း။
• လွန်ခဲ့သည့် သုံးလအတွင်း နှလုံးရောဂါဖောက် ဖူးခြင်း။
• လွန်ခဲ့သည့် ခြောက်လအတွင်း heart failure ဟုခေါ်သော နှလုံးအလုပ်မလုပ်တော့သည့် ဝေဒနာခံစားဖူးခြင်း။
• မျက်ကြည်လွှာ ပြဿနာရှိခြင်း။
• Retinitis pigmentosa ဟုခေါ်သော မွေးရာပါ မျက်စိရောဂါရှိခြင်း။
• မကြာသေးမီက လေဖြတ်ထားခြင်း —-> tadalafil ကို အသုံးမပြုသင့်။
• အစာအိမ်အနာရှိခြင်း —->ဘေးထွက်ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ချေကို ပိုမိုများစေသည်။ဤဆေးကို စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းရှိမရှိ သေချာစွာမသိရှိရပါ။
• သွေး သို့မဟုတ် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီဆိုင်ရာ ကင်ဆာများရှိခြင်း။(Leukaemia or bone marrow cancer)
• Sickle cell anaemia ဟုခေါ်သော သွေးအားနည်းရောဂါ တစ်မျိုးရှိခြင်း —-> အဆိုပါလူများတွင် tadalafil သည် လိင်တံကို အချိန်ကြာကြာပို၍ မာတောင့်စေသဖြင့် သတိထား အသုံးပြုရမည်။
• နှလုံးသွေးလျှောက်မှု ပြဿနာများ —-> အဆိုပါလူများတွင် tadalafil ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ပုံမှန်လူများထက် ပို၍များမည်ဖြစ်သည်။
• နှလုံးရောဂါ အခံရှိခြင်း —>သွေးပေါင်ကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သဖြင့် tadalafil ကို သတိထားသုံးစွဲသင့်သည်။
• အသည်းရောဂါ —–>ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုများစေသဖြင့် tadalafil ကို သတိထား သုံးစွဲပါ။ စတင်သုံးစွဲသော အခါ ဆေးပမာဏ အနည်းငယ်ဖြင့် စတင်သုံးစွဲသင့်ပြီး လိုအပ်မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးပေးသင့်သည်။
• မျက်စိတစ်ဖက်တွင် ဖြစ်စေ နှစ်ဖက်လုံးတွင် ဖြစ်စေ non-arteritic ischaemic optic neuropathy ဟုခေါ်သော မျက်စိရောဂါဖြစ်ဖူးသူများ —–> ထိုရောဂါကို တဖန်ပြန်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လိင်မဆက်ဆံမီ ၁၀မီလီဂရမ် ကြိုသောက်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် အများဆုံး တစ်ကြိမ်သာ သောက်သင့်သည်။
သို့မဟုတ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ၂.၅မီလီဂရမ် ကို တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သောက်နိုင်သည်။ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ဆေးပမာဏကို ၅မီလီဂရမ်အထိ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
၅မီလီဂရမ်ကို တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ် နေ့စဉ်အချိန်မှန်မှန်သောက်ပါ။
၄၀မီလီဂရမ်ကို (အစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ) တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ် နေ့စဉ်သောက်ပါ။ ဆေးကို အကြိမ်ခွဲမသောက်သင့်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Tadalafil ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
• ဆေးပြား ၂.၅၊၅၊၁၀၊၂၀ မီလီဂရမ်
h3>အရေးပေါ်အခြေအနေ ဒါမှမဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားချိန်မှာ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
Tadalafil ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Tadalafil https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604008.html. Accessed July 15, 2016.
Tadalafil https://www.drugs.com/tadalafil.html. Accessed July 15, 2016.
Tadalafil for erectile dysfunction http://patient.info/medicine/tadalafil-for- erectile-dysfunction-cialis. Accessed July 15, 2016.Tadalafil https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604008.html. Accessed July 15, 2016.